Home Aragti-doon 12 dabeecad oo uu leeyahay qofka deggan
Maxay ka dhigan tahay in aad qof deggan tahay? Jawaabta yaysan la yaab kugu noqonin!
Ma tahay qof deggan? Haddaba, guul wayn ayaa ku sugeysa!!! PHOTO: Unsplash
Dadka deggan way ka farxad badan yihiin kuwa iska caadiga ah ama buuqa badan
Si la mid ah dabeecado kale oo badan, qof kasta ayaa noqon kara mid deggan. Waxa keliye ee loo baahan yahay waa in qaab fikirkaaga aad bedesho.
Hoos ka akhriso dabeecadaha dadka deggan lagu garto.
Waa dad mahadnaq garanaya
Qofka deggan, wuxuu ku farxaa wax kasta – waxyar ama wayn. Waxay jecel yihiin in dhanka wanaagsan ay wax ka eegaan. Qofkii wanaag u sameeyana way uga mahadceliyaan. Qofkii qalad ka galena kuma mashquulaan.
Waa dad dhab ah
Qofka deggan waa mid daacad ah, waxkasta si asal ah oo dhab ah u eega. Ma lahan qorshe gaar ah oo u qarsoon, ama ujeeddo gaar ah. Waa dad lala joogi karo, lala shaqeysan karo ama lala noolaan karo, maadaama aysan ujeedooyiin guracan oo qarsoon aysan lahayn.
Way naxariis badan yihiin
Qofka deggan waa mid naxariis badan. Dadka leh dabeecaddan waxay leeyihiin dhaqan ay dadka ku daryeelaan, ayna ku ilaaliyahaa danaha wanaagsan ee qof kasta.
Way nicib yihiin dagaalka
Ma jeclo muran, khilaaf, xiriir dhib badan ama dagaal. Qof deggan oo muran iyo dagaal billaabaya in la arko lama arkayo – Wakhti iyo awood isagama bixiyaan.
Waa dad aragti dheer leh
Qof deggan waa mid fikir wanaagsan leh oo horey u sii qorsheysta arrimihiisa. Sidoo kale, dadka si deggan ayey u dhageystaan, wayna ka fikiraan hadalka afkooda ka soo baxaya. Wixii niyaddooda ku soo dhaca, kama soo saaraan afkooda iyagoo aan eegin oo aan turxaan bixinin.
Arrimaha kale waxaa ka mid ah
Waa dad aan kibir-badneyn
Ma ahan dad alaabaaha iyo waxyaabaha yaryar ka walwala
Waxay jecel yihiin isu dheellitirnaan
Waa dad arrimaha fududeeya
Waa dad xasilloon
Waa dad maankooda joogo
Way garanayaan ujeedada ay u nool yihiin
Ma jiro wax ka adag in aad noqoto qof deggan xilliga oo bulshooyiinka ay dhibaato badan yihiin, nolosha adduunkana carqalad badan tahay. Waxaa aad u sii badanaya kuwa dhuuniga ah, maseyrka badan, jecel khilaafka iyo is qabqabsiga.
In aad noqoto qof deggan ma ahan arrin aad fududeysan karto, haddioi aad dooneyso in aad guul ka gaarto dunidan casriga ah ee dhibaatada badan.
Previous articleKansarka beerka ku dhaca iyo cuntooyiinka halista ku ah
Next article5 aragti oo ku saabsan jaceylka – sirta cilmu-nafsiga